Myanmar Defence Weapons: Myanmar Police Special Task Force
တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို M-16 သေနတ် တပ်ဆင်ထားပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာ အေကေ-၇၄ အနက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မှု တချို့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်..။
Zaw Zaw Aung June 4, 2012 at 9:36 AM
အဲဒီ .... AK -47 တွေက ဘယ်ကရတာလဲဗျ ....
MM June 4, 2012 at 7:15 PM
Zaw Zaw Aung June 10, 2012 at 2:18 AM
“တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို M-16 သေနတ် တပ်ဆင်ထားပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာ အေကေ-၇၄ အနက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မှု တချို့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်..။” ဆိုတာကိုမေးတာဗျ...
Than Lwin January 14, 2014 at 5:17 AM
ဘာလုပ်လုပ်ကွာ၊ နောက်ဆုံး အသက်တွေကြီး မြေကြီးထဲ ၀င်မယ်ဟာတွေပဲကွာ။
Southern Tech May 3, 2016 at 9:05 PM
CQB အတွက်ကပြောင်းရှည် M16 တွေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်မှာလည်း? Close Quarters မှာဆိုရင်အဓိကအန္တရယ်ဟာချောင်ခိုနေတဲ့ရန်သူကကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ရှည်ကိုလှမ်းဆွဲလို့ရခြင်းပဲ။ ဒီလိုအဆောက်အအုံအတွင်းအခြေအနေမျိုးအတွက်ဆိုပြောင်းရှည်ခြေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်အစားcompactဖြစ်တဲ့sub-machine gunတွေကပိုထိရောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီကယ်လီဘာsub-machine gunတွေကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်over penetrationကိုလည်းကာကွယ်ပြီးအပြစ်မဲ့သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု့ကိုလည်းအလွန်အမင်းလျော့ကျစေနိူင်ပါတယ်။ ခြေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်မှသုံးရမယ်ဆိုလည်းအနည်းဆုံးတော့ပြောင်းတိုအမျိုးအစားM4ဒါမှမဟုတ်bullpupဒီဇိုင်းရိုင်ဖယ် (ဥပမာSteyr Aug ဒါမှမဟုတ် Tavor) မျိုးတွေကိုသုံးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ခတ်ထားတဲ့တံခါးတွေဖွင့်ဖို့shotgunကိုင်ဆောင်တာလည်းမတွေ့ရပါလား? လက်ရှိပုံတွေကြည့်ရတာတော့equipmentပိုင်းမှာအရမ်းလိုပါသေးတယ်။ Training ပိုင်းနဲ့ qualification ပိုင်းကတော့သုံးသပ်စရာသတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံမရှိတော့မပြောတတ်ပါဘူး။